Moya China Ukufika Okutsha Off Road Motocross Helmet abavelisi kunye nabanikezeli |Kangxing
Ukufika okuTsha kwi-Helmet ye-Motocross kwiNdlela
Isithuthuthu seTrunk yeBhokisi yesithuthuthu seTrunk yomsila weBhokisi yesithuthuthu...
DOT Matt Black Ubuso obugcweleyo Isigcina-ntloko sesithuthuthu Casco De ...
China Supplier Full Face Isithuthuthu Dual V...
Ihoyilesi yesithuthuthu Izixhobo zeSithuthuthu Umsila Box
Abasebenzisi ekujoliswe kubo:
Umzekelo NO. FD-166
Ubume I-Oval ejikelezayo
ISangqa seNtloko esisebenzayo 580~600mm
Uphawu Isigcina-ntloko seKax
Ikhowudi ye-HS 6506100090
Uphawu lokuthengisa KAX
Ipakethe yezoThutho Ibhokisi
2021 Ukufika Okutsha Off Road Motocross Isigcina-ntloko
Iqokobhe langaphandle Izinto ze-ABS
Iqokobhe langaphakathi Uxinaniso oluninzi lwe-EPS Liner
I-Internal Padding ILining esuswayo kunye neWashable
Amacandelo Umtya olungisekayo wesilevu
Inkqubo yokungenisa umoya Eyona Ukujikeleza
Peyinta Ipeyinti ekhuselayo yeUV Gqiba.
Umbala Nawuphi na umbala/OEM
I-Vent Isixhobo esingenasixhobo, isilevu esisuswayo sokulinda
Port of Original Ningbo okanye Shanghai
1. “Umgangatho yinkcubeko yethu”
2. Zonke iimodeli zethu ziza kunye neziqinisekiso ze-DOT, CE, CCC
3. IMALI EPHELELEYO kwimeko yomgangatho ombi .
4.Intlawulo nge-TT okanye i-LC.
5. ISivumelwano soMfihlo “Ikhontrakthi eyimfihlo yeshishini”
6. Ikhontrakthi yoQinisekiso loMgangatho
7. Emva kwenkonzo yokuthengisa 24 * 7H
Izigcina-ntloko zethu zinemigangatho ye-DOT, i-OEM, i-ODM iyamkelwa.Igobolondo elinamava, umyili we-decal kunye nomntu wezobuchwepheshe, ukulawula ngokungqongqo umgangatho, ukuhanjiswa kwexesha kunye nentliziyo efudumele emva kwenkonzo yokuthengisa.
1. Yintoni uluhlu lwemveliso?
Isigcina-ntloko esipheleleyo sobuso besithuthuthu, isigcina-ntloko esingaphandle kwendlela, isigcina-ntloko seModyuli, Isigcina-ntloko esivulekileyo sobuso, isigcina-ntloko esisiqingatha sobuso, isigcina-ntloko sabantwana, ibhokisi yomsila weMotorcycle njl.
2.Ithini imiqathango yakho yokuhlawula?
T / T 30% njengediphozithi, kunye ne-70% ngaphambi kokunikezelwa.Siza kukubonisa iifoto zeemveliso kunye neepakethi phambi kokuba uhlawule imali eseleyo.
3. Kuthekani ngexesha lakho lokuhambisa?
Ngokusisiseko, iintsuku ezi-3-5 zokusebenza zesampulu, iintsuku zokusebenza ezingama-30-50 zokuvelisa ukungcola emva kokuqinisekisa intlawulo.
4. Kuthekani ngenkonzo yakho?
Sineqela lesebe lezentengiso eziphezulu ezilungele ukukusebenzela ngomsebenzi wabo, amava kunye nokunyaniseka.
5.Singakwazi ukufumana isampuli yakho yamahhala?
Ewe, siyavuya ukukubonelela ngeesampulu zasimahla. Kufuneka uthwale kuphela iindleko zonikezelo olucacileyo.
Ngaphambili: FD-718 Intengiso eshushu DOT Ubuso obugcweleyo boMnqwazi wesithuthuthu
Okulandelayo: 2022 Entsha Ethandwayo 45L Isithuthuthu Aluminiyam Umsila Box
IiHelmethi zeBhayisekile ezimdaka eziphuma kwiNdlela
Isigcina-ntloko esingaphandle kwendlela
China Fashion isithuthuthu Ubuso obugcweleyo Casque Isigcina-ntloko
Ilensi ephindwe kabini Flip up Cascos isithuthuthu isigcina-ntloko
Izigcina-ntloko zeSithuthuthu ezitshiphuweyo ezivulekileyo zoBuso
China Factory DOT Double Visor Flip up Motorcyc...
Ibhokisi yemithwalo yomsila Amacandelo oMsebenzi wesithuthuthu Comie Motorcycle Tour Umsila Box Atv Case Ibhokisi yemithwalo yeClassic 350 Isithuthuthu Side Luggage Box